'डान्स बारबाट युवतीसहित प्रमुख (मेयर)अमरसिंह धामी प्रहरी फन्दामा'
प्रकाशित मितिः पुष 15, 2076
१५ पुष काठमाडौँ दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख ९मेयर० अमरसिंह धामी कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित एक डान्स बारबाट पक्राउ परेका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट मेयरमा निर्वाचित धामी महेन्द्रनगरस्थित ब्लू डान्स बारबाट पक्राउ परेका हुन् । डान्स बारमा मदिरा पिएर हो–हल्ला गरेपछि मेयर धामीसहित केही व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरको टोलीले मेयर धामी सहितका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको हो । वडा प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगर स्रोतका अनुसार डान्स बारबाट मेयर धामीसहित केही युवतीलाई समेत नियन्त्रणमा लिइएको हो । डान्स बारमा काम गर्ने केही युवतीले आफूमाथि दुव्र्यवहार भएको भन्दै प्रहरीलाई सम्पर्क गरेपछि प्रहरीको टोली डान्स बार पुगेको थियो । वडा प्रहरी कार्यालयका एक प्रहरी कर्मचारीका अनुसार प्रहरीको टोली डान्स बार पुग्दा दुवै पक्षबीच विवाद चलिरहेको थियो ।
प्रहरीको टोलीले डान्स बारमा विवाद गर्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर केहीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय र केहीलाई वडा प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएको थियो । प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि धामीले आफू जनप्रतिनिधि भएको भन्दै आफूलाई तत्काल रिहा गर्न प्रहरी कर्मचारीलाई नै चेतावनी दिएका थिए । आइतबार राति पक्राउ परेका धामी सोमबार बिहान नै रिहा भइसकेका जनाइएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रवक्ता डिएसपी नरेन्द्र चन्दले डान्स बारमा हो–हल्ला गर्ने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिँदा मेयर धामी पनि केही समयका लागि जिप्रका आएको बताए ।
‘डान्स बारमा दुई समूहबीच विवाद भएको थियो । एउटा समूहले मेयर धामीलाई पनि बोलाएको रहेछ । विवाद मिलाउन भनेर उहाँ डान्स बार पुगेको भन्ने कुरा आएको छ,’ डिएसपी चन्दले खबरहबसँग भने । दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका मेयर धामीको कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा समेत घर छ । मेयर धामीले भने आफू डान्सबारमा नगएको बताएका छन् । खबरहबको सम्पर्कमा आएका मेयर धामीले डान्सबारमा झगडा भएको विषय आफ्नो जानकारीमा आएपनि आफूलाई प्रहरीले पक्राउ नगरेको बताए । ‘डान्सबारमा झगडा भएको कुरा मैले पनि सुनेको हुँ । तर, म बारभित्र छिरिनँ । म पक्राउ परेको कुरा सबै झुटो हो,’ मेयर धामीले भने ।कामना न्युजबात साभार गरिएको हो श्राेत धुनखबर
धरान उपमहानगरपालिकाले बाड्यो ३६ हजार किलो चामल
लकडाउन उलंघन रोक्न खोज्दा छुरा प्रहार
नेकपाको वडा कमिटिले नै १ सय ७० परिवारलाई दियो खाद्यान्न
के ट्रम्पले भने जस्तो औलोको औषधीले कोरोना ठिक गर्छ ?
के यौन सम्पर्कका कारण कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण सर्न सक्छ ?
नेकपाले प्रदान गर्यो २५ क्विन्टल चामल